शेयर बजारको ‘गेम चेन्जर’ वर्ष २०७७ | Notebazar
शेयर बजारको ‘गेम चेन्जर’ वर्ष २०७७
काठमाडौं। १बैशाख, २०७८, बुधबार / Apr 14, 2021 17:48:pm
शेयर बजारमा गत वर्ष २०७७ मा रेकर्ड मात्रै बनेका छन् । गत वर्ष पूँजी बजार फराकिलो मात्र भएन आम सर्वसाधारणको चासो र चर्चाको विषयमा समेत शेयर बजार रह्यो ।
कोरोनाका भाइरसका कारण लगानीका अन्य क्षेत्र ठप्प जस्तै भएपछि शेयर बजारमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित भयो । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि सबैको आँखा शेयर बजारमा नै पर्न थाल्यो । विश्वभरी महामारीले तर्साएको अवस्थामा शेयर बजार भने एककाएक नयाँ उचाइमा पुग्यो ।
कोरोना महामारीले धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या मात्र बढाएन धितोपत्र बजार सूचक समेत १२१ प्रतिशतले बढेको छ । कोरोनाका कारण सरकारले २०७६ चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेपछि २०७७ वैशाख ३० गते बजार खुलेको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २०७६ बैशाख ३० गते १२२६.१५ अंकमा रहेकोमा २०७७ चैत ३१ गते २७१४.७९ अंकमा पुगेको छ ।
गत वर्ष शेयर बजारलाई विस्तार गराउनमा कोरोनाको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपनि धितोपत्र बजारलाई प्रविधिमा आधारित कारोबारका लागि योग्य बनाई लगानीकर्ताले घरबाट नै शेयरको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । प्राथमिक बजारमा प्रविधिको प्रयोगबाट शेयर आवेदन दिन सकनिे व्यवस्था सुरु भैसकेको अवस्थामा भएपनि उच्चतम प्रयोगमा आएको वर्ष पनि २०७७ नै हो ।
विगतका वर्षहरुमा ३ लाखसम्मको साधारण शेयरको आवेदनलाई अधिक भन्ने निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकहरु २०७७ सालमा एउटै आइपीओमा करिब १९ लाखसम्म आवेलदन परेपछि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । शेयरमा आवेदन दिएका सर्वसाधारणलाई रिजल्ट हर्न समस्या हुन थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले रिजल्ट हेर्नका लागि मात्रै छुट्टै व्यस्था गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष साधारण शेयर निष्काशन गरेर गत वर्ष कारोबारका लागि धितोपत्र बजारमा सूचिकरण गरेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले धेरैको सम्पत्ती बढाइदियो । कम्पनीको शेयर ४० कित्ता सम्म आवेदन दिएका सबैले शेयर पाए भने त्यो भन्दा माथिकाले १० कित्ता गोलाप्रथाबाट पाए । त्यसपछि कोरोनका कारण शेयर बजार नै बन्द रहेकाले २०७७ साउनमा मात्र सूचिकरण भएको कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति कित्ता शेयर मूल्य १८ सय रुपैयाँ सम्म पुगेको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा आएको सुधार तथा आकर्षणले शेयर बजारमा धेरैको आँखा पर्यो । त्यसपछि निरन्तर निक्षेप खाता खोल्ने तथा साधारण शेयरमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या मात्र बढेन दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने शेयर कारोबारी समेत बढे । त्यसपछि नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकको साधारण शेयर आयो । बैंकको शेयरमा पनि आवेदन दिएका सबैलै ५० कित्ता र गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता पाएका छन् । यसले पनि शेयर लगानीकर्तामा थप उर्जा थप्यो ।
गत वर्ष आर्थिक गतिविधि शेयर बजारमा मात्र बढेको देखियो । सम्पुर्ण कामकारबाही बर्क फ्रम होभ थियो । त्यसले पनि शेयर बजारमा सहभागिको संख्या बढेको हो । त्यती मात्र नभै कोरोनाका कारण कयौले रोजगारी गुमाएपनि बाच्ने आधारको रुपमा शेयर बजार बनिदियो । सबै क्षेत्रको लगानी शेयर बजारमा आएपछि नेप्सै सूचक निरन्रत नयाँ उचाई बनाइरह्यो । त्यसको प्रभाव प्राथमिक निष्काशनमा पनि पर्न थाल्यो । गत वर्ष कतिले साधारण शेयरमा लगानी गरेर जिवीका समेत चलाएको अवस्था रह्यो ।
चौतर्फि बढेको चर्चाले शेयर बजारमा लगानी मात्र बढाएन दायर र आकार समेत बढायो । शेयर बजारको दैनिक कारोबार रकम करोडमा सिमित रहेको अवस्थामा गत वर्ष एक दिनमा करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको शेयर खरिद बिक्री भएको छ । अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नेको संख्या नै ६ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ ।
२०७७ असारसम्ममा १७ लाख ५३ हजार रहेका हितग्राही खाताको संख्या २०७७ चैत ३१ गतेसम्म आइपुग्दा ३४ लाख २ हजार पुगेको छ । यसले पनि शेयर बजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता शत प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
२०७७ साल असार ३० गते धितोपत्र बजारमा कारोबार हुदाँ कुल बजार पूँजीकरण १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७७ चैत ३१ गते ३७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो विचमा १९ कम्पनीको १३ करोड १९लाख ९१ हजार एक सय १० कित्ता शेयर निष्काशन गरी कारोबारको लागि दोस्रो बजारमा सूचिकरण भएको छ । दोस्रो बजारमा नयाँ कम्पनी पनि थपिएसंगै बजारमा आएको उच्च अंकको सुधारले सम्रगमा बजार पूँजीकरण १४० प्रतिशतले बढेको हो ।
पूँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाका अनुसार गत वर्षमा शेयर बजारमा १५ बढी रेकर्ड कायम भएका छन् । मर्चेन्ट बैंकर एसोसियसन र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफाजि) को कार्यक्रमा ढुंगानाले सो जानकारी दिएका हुन् । ढुंगानाको यो भनाईबाटै गत वर्ष शेयर बजारका लागि गेम चेञ्जर वर्षको रुपमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिदैं, ३५ लाख बढी डिम्याट खाता खुले3days ago
सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरि सेवा दिन ब्रोकर कम्पनीलाई नेप्सेको निर्देशन 26/04/2021
शेयर लगानीकर्ताले एकै दिनमा गुमाए एक खर्ब ५ अर्ब 25/04/2021
टीएमएसमा समस्या आउँदा लगानीकर्तालाई सास्ती, दर्जन ब्रोकरका लगानीकर्ता कारोबारबाट बञ्चित 19/04/2021
साताको शेयर बजारः कसले कमाए-कसले गुमाए ? हेरौं विश्लेषण 17/04/2021
वर्षको अन्त्यमा सर्वाधिक उचाइमा शेयर बजार, आगामी वर्ष के होला ? 13/04/2021
एक वर्षमा १ हजार ८१ अंकले बढ्यो नेप्से, २.२९ खर्बको धितोपत्र सूचीकृत 12/04/2021